Toamasina – Noafahana vonjy maika i Dina mpanao « kidnapping » _ La gazette DGI du 27 mars 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Corruption MadagascarToamasina - Noafahana vonjy maika i Dina mpanao «...
Corruption MadagascarDysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheLe cerveau présumé d'un rapt libéré par la chambre d'accusationNEXTHOPERANARISON TsilavoRANDRIANASOLO Jacques
Mihorohoro ankehitriny ireo teratany Karana mpanefoefo ao Toamasina, indrindra fa ny fianakavian’i Arman Kamis, mpandraharaha any an-toerana izay nisy naka an-keriny, ny volana novambra tamin’ny taon-dasa teo. Efa miriaria eran’ny tanàna indray mantsy ankehitriny i Manantena Hajanirina Dina
rehefa nomen’ny fitsarana ambony ao Toamasina fahafahana vonjy maika, ny alatsinainy lasa teo. Ity farany izay voampanga ho ati-doha mpikotrika fakàna an-keriny eto amintsika, ka anisany efa lasibatra tamin’izany i Arman Kamis, araka ny efa voalaza tetsy ambony. Mpandraharaha iray ao Antsirabe ihany koa no voalaza fa efa nalain’izy ireo an-keriny, volana maro lasa izay. Tsara marihana fa nitsipaka ny fanomezana fahafahana vonjy maika an’i Dina Hajanirina ny fampanoavana amin’ny ambaratonga voalohany ao Toamasina, saingy mifanohitra tamin’izany kosa ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitsarana ambony. Ny Tonia mampanoa lalàna ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny lefiny ary ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimariam-pirenena ao amin’ny Faritra Atsinanana, dia samy nanamafy raha nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tany an-toerana fa io Dina Hajanirina io mihitsy no tompon’antoka tamin’ny fakàna an-keriny an’i Arman Kamis. Marihana ihany fa mpikambana tao anatin’ny vovonana pôlitika MAPAR ity mpanao “kidnapping” gaigilahy ity, talohan’ny nisamborana azy, ary raha ny fantatra dia kandidà depiote mpisolo toerana ao amin’ny distrikan’Ifanadiana ny tenany na mbola voatàna vonjy maika tao amin’ny fonjan’Ambala-
tavoahangy aza. Mampametra-panontaniana ihany moa ny hoe: “ahoana no naneken’ny CENI ny filatsahan-kofidian’i Manantena Hajanirina Dina kanefa mbola manana raharaha maloto eo anivon’ny fitsarana ary mbola voatàna am-ponja vonjy maika? Midika ve izany fa tsy misy mihitsy ny fanadihadiana ataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amin’ireo anaran’olona milatsaka ho fidiana depiote?” Marihana fa olona miisa 8 hafa, izay voalaza fa mpiray tendro amin’io lehibena tambazotra mpaka an-keriny io no efa voasambotra ary niara-niditra am-ponja vonjy maika taminy. Andrasana moa ny hevitra ny minisitra ny Fitsarana manoloana ity raharaha ity. Ny fitondrana mijoro ankehitriny mantsy izay midradradradra fa tsy handefitra mihitsy amin’ireo mpanao ratsy eto amin’ny firenena.
Previous articleFakana an-keriny tao Toamasina – Nahazo LP ilay voarohirohy ho lehiben’ny mpanao kidnapping – Midi madagasikara du 27 mars 2019
Next articleKandida depiote atidohana kidnapping tany Toamasina – Nomena fahafahana vonjimaika i Hajanirina – Tia tanindrazana du 27 mars 2019